» बेवारिसे लासको, कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा, आखिर किन छुट्टीए बाउ छोरी ? (भिडियो हेर्नुस्) बेवारिसे लासको, कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा, आखिर किन छुट्टीए बाउ छोरी ? (भिडियो हेर्नुस्) – हाम्रो खबर
बेवारिसे लासको, कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा, आखिर किन छुट्टीए बाउ छोरी ? (भिडियो हेर्नुस्)
बेवारिसे लासको, कसम खादै सपनाले गरिन यस्तो खुलासा, आखिर किन छुट्टीए बाउ छोरी ?
“काठमाडौ । वेवारिसे शव ब्यवस्थापनमा लागेकी १७ वर्षकी सपना रोका मगर विनजजंग वस्नेतसंग अलग्गिएर छुट्टै काम गर्न थालेकि छन् । उनले नेपालगन्जवाट कामको सुरुवात गरेकी छन् ।
“वे,वारिसे शव ब्यवस्थापनकै कारण बीबीसीमा विश्वमा १०० शक्तिशाली महिलाको सूचीमा राखेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । विनयजंग बस्नेतसंग लागेर उनले शव ब्यवस्थापनको काम थालेकी थिइन् । तर पछि उनीहरुको सम्बन्धमा समस्या आएपछि उनी आफ्नो घर फर्किएकी थिइन् ।
“अहिले उनले छुट्टै संस्था दर्ता गरेर काम थालेको बताएकी छन् । नेपालगन्जमा पहिलो शव ब्यवस्थापन गर्दै उनले कसैले चाहँदैमा आफुले सुरु गरेको समाजसेवाको काम नरोकिने बताइन् ।
“उनले आफुलाई शव ब्यवस्थापनको काम नदिनु भनेर काठमाडौवाट अस्पताल प्रशासनमा फोन गरेर रोक्न कोशिस गरिएको पनि बताइन् । तर आफुलाई साथ दिने धेरै आएको भन्दै उनले खुसी ब्यक्त गरेकी छन् ।
“उनले नयाँ संस्था खोलेर छुट्टै काम गर्न थालेपछि विनयजंग र सपनाको सम्बन्धका बारेमा नकारात्मक समाचार बाहिर आएका छन् । विनयजंगलाई सपना माथि नराम्रो ब्यवहार गरेको आ,रोप,लगाइएको छ । यता विनयले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सपना माथि पैसा हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् ।